रूपन्देहीमा आपराधिक घटना बढेको बढ्यै :: भगवती पाण्डे :: Setopati
रूपन्देहीमा आपराधिक घटना बढेको बढ्यै
भगवती पाण्डे बुटवल, असोज ३
गत भदौ २९ गते रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका वडा नं. २ भैरहवा धकधई सडकखण्डमा गोली चल्यो। मोटरसाइकलमा आएका दुई जनाको समूहले गोली हानी रुपन्देही ओमसतिया गाउँपालिका वडा नं. ५ का ३५ वर्षीय महेन्द्र कुर्मीको हत्या गर्‍यो।
श्रीमती र बच्चासहित भैरहवास्थित हिमालयन बैंकबाट पाँच लाख रुपैयाँ झिकेर मोटरसाइकलमा घर जाँदै गरेका कुर्मीलाई गोली प्रहार गरी सो समूहले उनीसँग भएको रकम समेत लुटेर भाग्यो।
प्रहरीले गोली प्रहार गर्ने समूह सिसिटिभी भिडिओमा देखिए पनि अहिलेसम्म हत्यामा संलग्नको पहिचान गर्न सकेको छैन।
पछिल्ला केही वर्षयता रुपन्देहीमा यस्ता आपराधिक घटना बढेका बढ्यै छन्।
२०७३ साल पुस ४ गते रुपन्देहीको देवदहका व्यवसायी तथा तत्कालीन युवा संघका जिल्ला अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको गोली हानी हत्या भयो।
तिवारीको हत्या भएलगत्तै गुण्डा नाइके मजोज पुनले टेलिफोन गरी प्रहरी प्रशासनलाई चुनौती दिँदै तिवारीको हत्याको जिम्मा लिए।
तिवारी हत्याको एक वर्ष १७ दिनपछि २०७४ साल पुस २१ गते देवदहकै अर्का व्यवसायी बलु भनिने वसन्त पौडेलको हत्या भयो।
प्रहरी प्रशासन, पत्रकार राजनीतिक कार्यकर्ता लगायतलाई टेलिफोन गर्दै मनोज पुनले नै वसन्त पौडेलको हत्याको जिम्मा लिए।
देवदह क्षेत्रमा खोलानालाको ढुंगा-गिट्टी बालुवाको ठेक्कापट्टा लिँदै आपराधिक समूह बनाएका गरेका पुनले दुई-तीन वर्षमा रुपन्देहीमा अपराधको संगठित जालो बनाइसकेका थिए।
तिवारी र पौडेलको हत्यापछि मनोज पुनले नाम चलेका गुन्डाहरूसँग आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्दै गए। यसैक्रममा २०७५ साल फागुन ९ गते सहयोगी सोम आलेसहित पुन प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले रामेछापका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक कुमोध ढुंगेलको नेतृत्वमा पुन इन्काउन्टरका लागि रुपन्देहीमा टोली पठाएको थियो। पुनको इन्काउन्टरपछि ढुंगेल एक वर्ष रुपन्देही जिल्ला प्रहरीमै रहे।
पुनको इन्काउन्टरसँगै रुपन्देहीमा हतियार प्रयोग गरी हत्या गर्ने, धम्क्याएर रकम असुली गर्ने फिरौती लिनेजस्ता आपराधिक गतिविधि रोकिने अनुमान गरिएको थियो।
उद्योगी, व्यवसायी तथा जग्गा कारोबारीलाई धम्क्याउने र रकम असुली गर्ने क्रम रोकिए पनि हतियार प्रयोग गरी व्यक्ति हत्या गर्ने क्रम त्यसयता पनि जारी नै छ।
२०७५ साल चैत १३ गते बुटवल १ मैनाबगरमा बस्दै आएका भारतीय नागरिक फिरोज खानको हत्या भयो। लामो समयदेखि बुटवलमा मोटर ग्यारेजमा काम गर्दै आएका खानमाथि उनकै श्रीमतीको योजनामा गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाइसकेको छ।
२०७४ साल फागुन २८ गते रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने ३८ वर्षीय हरिस सेठियामाथि गोली प्रहार भयो। हुण्डी कारोबारी सेठिया सकुशल रहे। शरीरमा गोलीका छर्रा लागेका उनी उपचारपछि घर फर्केका थिए।
२०७५ पुस २९ गते सिद्धार्थनगर नगरपालिका वाड नं. १० मा सिद्धार्थनगर-६ का केदार सहनीको प्रहरीसँग मुठभेड भयो।
गस्तीमा रहेका प्रहरीमाथि नै गोली प्रहार गर्न खोज्दा जवाफी फायर गर्दा प्रहरीको गोली लागी सहनीको मृत्यु भयो। उनी साना हतियार कारोबारी थिए।
२०७५ जेठ २ गते रुपन्देहीको तिलोत्तमा मणिग्राममा घर निर्माण गर्दै गरेका रुपन्देहीको मर्चवारीमाई वडा नं. ४ बैरघाटका ४० वर्षीय रामकेश धवलमाथि गोली प्रहार भयो।
यी त प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। भारतीय सीमा जोडिएका तराईका जिल्लाहरूमा साना हतियारको प्रयोगबाट व्यक्तिको हत्याका घटना भइरहेका छन्। प्रहरीले साना हतियारको प्रयोग र ओसारपसार नियन्त्रण गर्न सकेको छैन।
खुल्ला सीमा नाकाका कारण साना हतियार सजिलै ल्याउन सकिने भएकोले प्रहरीलाई यस्ता हतियार टाउको दुखाइ बन्ने गरेका छन्।
प्रदेश ५ प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुरेशविक्रम शाहले साना हतियारहरू भारतीय बजारमा सहज रुपमा उपलब्ध हुने हुँदा सीमावारि आएर अपराध गर्न सजिलो भएको बताए।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख शाहले चाडपर्वको समय आइरहेकोले पनि आपराधिक घटना नदोहोरिउन् भन्ने उद्देश्यले नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय क्षेत्रका सुरक्षा निकायसँग छलफल गरिरहेको बताए।
‘एकातर्फ भारतीय बजारमा साना हतियार सहजै उपलब्ध हुने र अर्कोतर्फ खुल्ला सिमानाका कारण नेपाल प्रवेश पाउने भएकोले नाकाहरूबाट भित्रिन नपाउन् भनेर चेकजाँच बढाएका छौं,’ उनले भने ‘तर पनि बजार र प्रहरीको उपस्थिति हुने भन्दा साना र सुनसान नाकाहरूबाट भित्रिने गरेको पाइएको छ।’
प्रहरीले रुपन्देहीबाट मात्र गत आर्थिक वर्षमा सात वटा साना हतियार बरामद गरेको थियो।
प्रदेश ५ का १२ जिल्लाबाट घरेलु रिभल्बर २ थान, ४ थान १२ बोर, ६ थान अमेरिकन अटोमेटिक पेस्तोल, ९ थान कटुवा पेस्तोल, २ थान एयर पेस्तोल बरामद गरेको छ। त्यसैगरी, २ थान पेस्तोल, ५ थान एयर गन, ३ थान टुटु म्याग्नम बरामद गरेको छ। यस्तै, २ सय १६ थान भरुवा बन्दुक बरामद भएका छन्।
यो तथ्यांकले प्रदेश ५ का जिल्लामा हतियार प्रयोग र ओसारपसार बढेको देखाउँछ।
तराईका जिल्लामा पेस्तोल र पहाडी जिल्लामा भरुवा बन्दुक बरामद हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। दाङ, प्यूठान र रुकुमपूर्वमा दर्जनौं भरुवा बन्दुक बरामद भएका छन्। प्रहरीले हतियारसहित ६५ जनालाई पक्राउ समेत गरेको छ।
प्रदेश प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भन्दा २०७५/७६ मा हातहतियार धेरै बरामद भएका छन्। तर, हातहतियारसहित मानिस पक्राउ पर्ने क्रम भने घटेको छ। अघिल्लो वर्ष हातहतियारसहित प्रहरीले ८७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो।
तर, रुपन्देहीबाट भर्खरै सरुवा भएका प्रहरी उपरीक्षक हृदय थापा भने संगठित रुपमा रहेको आपराधिक जालो प्रहरीले तोडिसकेको बताउँछन्। खुला सिमाका कारण साना हतियार प्रयोग र ओसारपसार भने भइरहेको उनले बताए। ‘हामीले रोकिरहेका छौं, अपराधलाई शून्य पार्न सकिएको छैन,’ उनले भने।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ३, २०७६, ०६:१६:००